Tete Bible Nkyerɛwee—Asɛm a Ɛho Hia
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Sɛ wode Bible toto nyamesom nhoma ahorow ho a, Bible no da mu fua. Nhoma biara nni hɔ a efi bere tenteenten ni, akyerɛ nnipa pii sɛnea ɛsɛ sɛ wɔbɔ wɔn bra te sɛ Bible no da. Saa ara nso na Bible no ne nhoma a nnipa ayɛ mu nhwehwɛmu akɔ akyiri, na wɔasan akasa atia paa.
Nhwɛso bi ni, nhomanimfo bi nnye nni sɛ, Bible a wɔkyerɛwee tete no, ɛno ara na ɛwɔ hɔ nnɛ no. Nyamesom ho ɔbenfo bi kae sɛ: “Yɛrentumi nka no pefee sɛ Bible a ɛwɔ nnɛ no te sɛ nea wɔkyerɛwee tete no pɛpɛɛpɛ.” Ɔka kaa ho sɛ: “Nea ɛwɔ hɔ nnɛ no, mfomso ayɛ mu ma; nsonsonoe kɛse wɔ ɛne tete de no mu.”
Ebinom wɔ hɔ a ɔsom a wɔde tetee wɔn nti, wonnye Bible no ntom. Faizal sei, n’abusuafo a wɔnyɛ Kristofo kyerɛkyerɛɛ no sɛ Bible no yɛ nhoma kronkron, nanso wɔasesa mu nsɛm. Ɔka sɛ: “Ɛno nti, na mempɛ koraa sɛ nkurɔfo bɛka Bible mu asɛm akyerɛ me, yɛbɛka koraa a wonni tete Bible no. Wɔasesa no!”
Sɛ Bible no asesa anaa ɛnsesae a, ɛfa yɛn ho sɛn? Wo de, ma yensusuw nsɛm yi ho nhwɛ: Daakye ho bɔhyɛ a ɛma yenya awerɛkyekye pii wɔ Bible no mu, nanso sɛ enni tete Bible nkyerɛwee no mu a, wobɛyɛ dɛn de wo ho ato so? (Romafo 15:4) Sɛ mfomso ahyɛ Bible a ɛwɔ hɔ nnɛ yi mu mã, ɛnna woresi gyinae afa w’abusua, adwuma a wobɛyɛ, anaa ɔsom ho a, anka wobɛhwehwɛ afotu afi mu?
Ɛwom, nhoma ahorow a Bible akyerɛwfo no ankasa de wɔn nsa kyerɛwee no, ɛnnɛ ebi nni hɔ nanso wɔn de no a afoforo hwɛɛ so kyerɛw bi no de, ebi da so ara wɔ hɔ—Bible nsaano nkyerɛwee pii ka ho. Ɛyɛɛ dɛn na saa nsaano nkyerɛwee no bi da so ara wɔ hɔ, na atamfo antumi ansɛe no anaa wɔansesa emu nsɛm no? Ɔkwan bɛn so na nsaano nkyerɛwee ahorow a ɛwɔ hɔ no betumi ama woanya awerɛhyem wɔ Bible a ɛwɔ hɔ nnɛ no mu? Asɛm a edi hɔ a ɛkyerɛ nea enti a Bible no ansɛe no bɛma woanya nsɛmmisa yi ho mmuae.